सेन्सर बोर्डको आँखा कता ? के हेर्दै छ विकास बोर्ड ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरुमा मनपरी प्रणाली लागु भएको छ । चलचित्रको आफ्नै दायरा र निती नियम छ । चलचित्र दर्ता देखी प्रदर्शन सम्म विभिन्न निती नियमरु पालना गर्नु जरुरी छ । एउटा चलचित्र निर्माण गरिसकेपछि प्रदर्शन गर्नु पूर्व जाँच पास गर्नु जरुरी छ । र यो नियम नेपालमा पनि लागु हुदै आएको छ । तर पछिल्लो समय केही चलचित्रहरुलाई यो नियम लागु नभएको हो या लागु गर्न नमानेको हो यो फारक पाटो हो ।
चलचित्र जाँच पास को अनुमति पाएको चलचित्र जाँच पास समितीले चलचित्र जाँच गर्दा सबै मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा समिती लाई नै थाहा होला । तर जाँच पास गर्दा पास गर्न नमिल्ने सम्म भएमा जाँच पास प्रमाण पत्र दिनु गलत हो । कुनै चलचित्रको जाँच पास गर्दा सेन्सर गर्नु पर्ने केही सिनहरु या लागु गर्नुपर्ने नियमहरु चलचित्रले लागु नगरेको खण्डमा सर्टिफिकेटमा यो –यो सच्याउनु वा हटाउनुु वा यी कुरा हरु जानकारी को रुपमा राख्नु भनेर प्रमाण पत्र दिनु कतिको जायज हो त्यो पनि चलचित्र जाँच सािती लाई नै थाहा होला ।
तर त्यसरी प्रमाण पत्र दिईसकेपछि चलचित्रले ती कुरा लागु गरेन या चलचित्र जाँच पास समितीको नियम मानेन भन्ने के कार्वाही हुन्छ या हुन्छ की हुदैन भने मूख्य कुरा हो । अवश्य पनि कानुनी रुपमा कार्वाही हुन्छ । तर यतिखेर न त त्यस्ता चलचित्रलाई कार्वाही भएको छ । न त चलचित्र जाँच पास समिती आफ्नो नियम लागु गर्न सकेको छ । के फिल्म हलमा फिल्म हेरेको जस्तै गरेर निर्माताको भत्ता पचाउनकै लागि मात्र हो सेन्सर बोर्ड ? यो सेन्सर बोर्डले लगाएका नियम तोड्ने त्यस्तो कुनै चलचित्रलाई कार्वाही नै गर्न नसक्ने हो त सेन्सर बोर्डले ?
यस्तै भएको छ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरुमा पनि । यसो नेपाली चलचित्र जाँच पास गर्दा नेपाली चलचित्रका निर्माताहरु लगातार मारमा पर्दै आएको कुरा दिनदिनानु बढ्दो छ । हिन्दी चलचित्रको जस्तो सुकै सिनहरु पास हुने तर नेपाली चलचित्रको पास नहुने लगायतका थ्रुप्रै कारणहरु यथावत छन् । सरकारले लगाएको नियमलाई समेत न चलचित्र जाँच पास समितीले लागु गर्न सकेको छ न चलचित्र विकास बोर्डले ।
हामी कुरा गर्दैछौं, चलचित्रले निती नियम लागु नगरी कसरी जाँच पासमा प्रमाण पत्र पायो र सेन्सर बोर्डले लगाएको नियम पालना नगरी कसरी प्रर्दशन भयो भने वारेमा ।
पछिल्लो समय प्रदर्शन भएको चलचित्र पर्वमा ध्रुम्रपान र मद्यपान गरेको धेरै सिनहरु थिए । ती सिनहरुमा कहिँ कतै जनचेतनामूलक जानकारी प्रस्तुत गरिएको छैन । अर्थात धुम्रपान तथा मद्यापान स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ या यस्तै यस्तै सञ्देहरु दिईएको छैन । यति मात्र हैन शुक्रवार देखी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र आधा लभमा पनि यो कमजोरी दोहोरिएको छ । अन्य चलचित्रमा सेन्सर हुने अधिकांश सिनहरु चलचित्र लाल्टिनमा सेन्सर भएको पाईएन । चलचित्र लाल्टिनमा पनि ड्रग्स प्रयोगमा धुप्रपान नै उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता लागु पदार्थ सेवनमा सिनहरु समेत मल्लिन गर्नुपर्ने सेन्सर बोर्डको अवधारण छ । किन मनपरी भईरहेको पछिल्लो समय । कि नियम हटाईएको हो या सेन्सर बोर्डले मतलव नदिईएको हो या निर्माताले अटेर गरेको हो । वास्तविकता के हो र कार्वाही कसलाई हुनुपर्ने हो यसको जवाफ कसले दिने ? किन मौन छ सेन्सर बोर्ड अनि चलचित्र विकास बोर्ड । सेन्सर बोर्डका केही पदाधिकारीहरुले प्रमाण पत्रमा हामीले लेखेर दिएका हुन्छौ, त्यो पालना नगर्नु निर्माताको कमाजोरी भनिएको छ । यसलाई कार्वाही कसले गर्ने ? सेन्सर बोर्ड मौन छ ।
सेन्सर बोर्डकै भाषामा चलचित्रको अनुगमन चलचित्र विकास बोर्डले गर्ने हो भने विकास बोर्ड पनि किन मौन देखिएको छ त यो विषयमा । अहिले कसरी यस्ता कमजोरी लुकाएर चलचित्र प्रदर्शन भईरहेको छ । अझ चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु पूर्व राष्ट्रिय गीत अनिवार्य बजाउनु पर्ने नियम ल्याईएको थियो । यदि चलचित्र भवनले राष्ट्रिय गीत नबजाईएमा कार्वाही गर्ने समेत भनिएको थियो । अहिले कति वटा हलमा बजिरहेको छ त राष्ट्रिय गीत । यसको अनुगमन कसले गर्ने ? राष्ट्रिय गीत बजाउन अटेर गर्ने हलहरुलाई कार्वाही कसले गर्ने ?
यस्ता थुप्रै कमी कमजोरीहरु बढदै गईरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष समाजमा पर्न जाने असर र समस्याहरुको जिम्मेवारी चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समितील लिने कि नलिने ? यसर्थ अबका दिनमा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।